I-apple iphone x vs iphone 8 vs iphone 8 plus
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Apple iPhone X vs iPhone 8 vs iPhone 8 Plus
I-Apple ine-iPhones ezintathu ezintsha kulo nyaka: i-iPhone X, i-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus.
Ngelixa zonke zibaleka kwi-iOS kwaye zinezixhobo ezifanayo ngaphakathi, inye kuphela yazo eziva inyani ngokwenyani kwaye yiyo leyoIfowuni ye-X.
Inew entsha & ldquo; sonke-isikrini & rdquo; uyilo (ngenotshi!), Inesimo esibonakalayo esiqhutywa sisimbo, kwaye ine-ID yobuso. Kwaye ixabiso layo liqala kwi- $ 1,000.
Ngaba uziva njani xa uyisebenzisa xa kuthelekiswa ne-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus? Ngaba kukho umahluko kwintsebenzo yokwenyani, ubungakanani bekhamera kunye nobomi bebhetri? Sichithe iintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sihlala nezi iPhones zintathu ukufumanisa.
Iscreen esikhulu, umzimba odibeneyo kunye noyilo olumangalisayo kwi-iPhone X iphantse yasenza sayilibala inotshi. I-8 kunye ne-8 Plus ziziva ngathi ziyadika.
Kwiminyaka ngoku, sinayo i-iPhone encinci kunye ne & ldquo; dibanisa & rdquo; imodeli, 5.5 engaphezulu & rdquo; ifowuni enkulu kunezinye iifowuni ezinkulu. Eyona nto yayilahlekile yayikukhetho oluphakathi, imodeli enescreen esikhudlwana, kodwa esingaziva sikhulu kakhulu ukuba singathwala epokothweni. I-iPhone X iyayifanela loo ndawo ngokugqibeleleyo. Kwaye ubukhulu bayo bunokuba sesinye sezona zibonelelo zibalaseleyo zesixhobo ohamba naso yonke imihla.
Nabu ubungakanani bobukho bobuqobo bobathathu:
I-iPhone 8: 5.45 x 2.65 x 0.29 intshi (138.4 x 67.3 x 7.3 mm)
I-iPhone X: 6.24 x 3.07 x 0.30 intshi (143.6 x 70.9 x 7.7 mm)
I-iPhone 8 Plus: 6.24 x 3.07 x 0.30 intshi (158.4 x 78.1 x 7.5 mm)
I-iPhone 8 Plus yeyona inzima kuzo zonke. Inobunzima be-7.13 oz (202 g), eyenza ukuba kungabikho lula ukuphatha epokothweni. I-iPhone X inobunzima be-6.14 oz (174 g) efanelekileyo, ngelixa i-iPhone 8 yeyona ilula kwaye ikulungele ukuphatha epokothweni kwi-5.22 oz (148 g).
Akukho qhosha lasekhaya kwi-iPhone X Olunye utshintsho olunomdla kwi-iPhone X kukuba ineqhosha elikhulu lokukhiya kwicala lasekunene. Sifumana oku kufanelekile: kulula & rsquo; ukufumana nokucinezela, kwaye kulula ngakumbi kwiqhosha olicofa kumashumi okanye kumakhulu amaxesha suku ngalunye.
Sikwasithanda nesakhelo esimenyezelayo esingenasici se-iPhone X, into eyahlukileyo ngaphezulu kokugqitywa kwe-matte aluminium kwi-8 nakwi-8 Plus. Zonke iifowuni zineglasi enesitayile ngasemva, kodwa unemibala emibini kuphela-ngwevu nesilivere / emhlophe kwi-X, ngelixa i-8 kunye ne-8 Plus zikwakhona ukugqitywa kwegolide.
Zonke ii-iPhones ezintathu ezintsha zithwala i-IP67 yokulinganisa amanzi kunye nothuli. Akukho mahluko kwinqanaba lokhuselo lwamanzi phakathi kwabo: zonke zinokumelana nokuntywiliselwa ukuya kuthi ga kwi-3 yeenyawo zamanzi anzulu kangangemizuzu engama-30.
Ewe umahluko omkhulu phakathi kwezi iPhones zintathu ngumboniso: i & ldquo; sonke isikrini & rdquo; I-iPhone X yahluke mpela kwii-bezels ezinkulu kwi-iPhone 8 kunye ne-8 Plus (kodwa ngaphezulu koko kamva).
5.65 x 2.79 x 0.3 intshi
I-Apple iPhone 8
5.45 x 2.65 x 0.29 intshi
I-Apple iPhone 8 Plus
6.24 x 3.07 x 0.3 intshi
I-7.13 oz (202 g)
Bona iApple iPhone X epheleleyo vs Apple iPhone 8 vs Apple iPhone 8 Plus ubungakanani uthelekiso okanye uthelekise nezinye iifowuni zisebenzisa isixhobo soThelekiso soBungakanani.
I-ID yobuso vs Isazisi sokuchukumisa
Kuba i & rsquo; s sonke iscreen ngaphambili, akukho qhosha lasekhaya kwi-iPhone X kwaye akukho scanner sokuchukumisa iminwe se-ID nokuba. Endaweni yokuba uvule ngokukhuselekileyo ifowuni yakho, une-ID yobuso, inkqubo entsha kraca ejonga ubuso bakho kwaye ibone ukuba nguwe okanye akunjalo.
Isebenza njani i-ID yobuso?
I-ID yobuso yinkqubo ehlanganiswe ngokupheleleyo kwipaneli yekhamera yangaphambili, ebizwa ngokuba yinotshi. Kuyo ingaphezulu kwekhamera yee-selfies, kodwa kunye nokukhanya kwe-infrared kunye neprojektha yamachaphaza. Nantsi indlela esebenza ngayo: uphakamisa ifowuni yakho kwaye ikhamera ijonge ubuso (ukuba kumnyama, ukukhanya kwe-IR kudanyaza ukuvumela ikhamera ibone ebumnyameni). Ukuba ikhamera ifumanisa ubuso, iiprojektha zeprojekti zichaza amachaphaza angama-30,000 ebusweni bakho, yenza imephu epheleleyo ye-3D yobuso bakho. Iziphumo zolu scan lwe3D zithunyelwa kwi-chip ekhuselekileyo kwi-iPhone (ukuskena kobuso bakho akukaze kuthunyelwe kwi-intanethi) apho kuthelekiswa nobuso osele ububhalisile. Ukuba kukho umdlalo, i icon encinci kwi-iPhone X yokutshixa isikrini kwaye uswayipha phezulu ukusuka ezantsi ukuvula ifowuni. Konke oku kwenzeka kwisibini esahluliweyo: umbono kukuba wena phakamisa nje ifowuni kwaye uswayipha, awufuni kulinda ukuba ubone ukuvulwa kwe-icon yokuvula, konke kufanele ukuba kwenzeke ngasemva. Ukuba ubuso bakho abaziwa, uya kuziva ukungcangcazela okuncinci kwaye emva komzuzwana, uya kuchwetheza ikhowudi yakho ye-PIN ukuze ungene.
Ukuseta i-ID yobuso
UApple uthi i-ID yobuso ikhuseleke ngakumbi kunenkqubo endala yokuqonda iminwe yokuChukumisa. Amathuba okuqhekeza i-ID yobuso yi-1 kwisigidi xa ithelekiswa ne-1 kwi-50,000 ye-ID yeTouch, ngokwe-Apple. Kwaye ekubeni i-ID yobuso isebenzisa iskena se-3D, awunakho ukubonisa ifowuni ifoto yomnini wayo kwaye uyikhohlise ekuvulekeni. Nangona kunjalo, sele siyibonile inkampani yokhuseleko lwe-cyber Bkav yenza isigqumathelo se- $ 150 esinokuphumelela ukukhohlisa i-ID yobuso, yiyo nayiphi na inkqubo, le nayo ayifezekanga.
Sikwathelekise ubuso be-ID vs isantya se-ID. Kwaye ngelixa i-ID yobuso ichanekile ngokucocekileyo yenkqubo entsha yokhuseleko, siziva ngathi i-ID yokuChukumisa isebenza rhoqo kwaye ivula i-iPhone ngokukhawuleza.
I-OLED ibonisa eyona mibala mihle, ijongeka imangalisa. Kodwa sidinga ixesha elingakumbi ukuze sazi ukuba ingaba iyakubandezeleka ngenxa yokutsha. I-iPhone 8 kunye ne-8 Plus ineescreen ze-LCD ezinokuthenjwa nezijongeka kakuhle.
I-iPhone X siscreen sokuqala esingaphantsi kwe-bezel kwi-iPhone kwaye eyokuqala isebenzisa itekhnoloji ye-OLED endaweni ye-LCD yemveli esetyenziswa kuzo zonke ii-iPhones, kubandakanya i-8 kunye ne-8 Plus.
Kuqala, masenze i-rsquo; s yenze into ibenye: i-iPhone X inesikrini esizi-intshi ezi-5.8, kodwa eyona ndawo yayo incinci kune-5.5-intshi i-iPhone 8 Plus. Isizathu soku kukuma kwezinto ezahlukeneyo: i-8 Plus ine-16 yemveli yokuqhelaniswa ne-9, ngelixa i-X inomfanekiso omde, 2.17: 1 umlinganiso. Unokufunda inkcazo eneenkcukacha malunga noku Apha .
Kubomi bokwenyani, oku kuthetha ukuba xa ubukele iividiyo kwi-iPhone 8 Plus, uya kuba nakho ukubona okungaphezulu kunaku-X. Kuluhlu olude okanye kumaphepha ewebhu, nangona kunjalo, i-iPhone X entsha iyakwazi ukubonisa umxholo ongaphezulu .
Kuthekani ngezona zincinci kuzo zonke, i-iPhone 8? Ine-4.7 intshi 16: 9 Isikrini se-LCD esibonisa ulwazi oluncinci kunabanye. Nangona kunjalo, ukuba ujongana neapps ezingekalungiswa kwi-iPhone X kwaye isabonakala kwi-16: 9 yokuziqhelanisa nemivalo emnyama phezulu nasezantsi, unendawo efanayo yescreen kwi-X nakwi-iPhone 8.
Nantsi inkangeleko eneenkcukacha Esisikrini sihambelana nomxholo wobomi bokwenyani !
Into ongayifumaniyo kwitafile ethile kukuba izikrini zibonisa njani umbala. I-iPhone X enesikrini sayo esitsha se-OLED inezibonelelo ezimbalwa ngaphezulu kwe-8 kunye ne-8 Plus: inemibala eqaqambileyo, emnyama ngakumbi kunye nokungafani okungcono, konke ukudibanisa kunye neempawu ezibonakalayo ezinomtsalane, nokuba kungengomda omkhulu. Iscreen sayo siyakhanya ngakumbi kwaye siyabonakala ngaphandle. Kodwa ikwanazo neecala eliphantsi: ukuba ugoba ifowuni uyakuqaphela utshintsho oluncinci kwimibala eya kwi-blue gamut. Lo asingomcimbi omkhulu njengoko kunjalo kwiGoogle Pixel 2 XL, kodwa iRsquo iyaqapheleka ngakumbi kune-iPhone 8 kunye ne-8 Plus. Emva koko, kukho omnye umcimbi onokubakho: ukutshisa ngaphakathi.
Yintoni ukutshisa ngaphakathi?
Ukutshisa ngumcimbi ochaphazela ukuboniswa kwe-OLED. Kuba izikrini ze-OLED zikhanyisa ipikseli nganye ngokwahlukeneyo, ukuba ubonakalisa imibala eqaqambileyo kwindawo enye, iipikseli apho zinako & ldquo; ukutshisa & rdquo;. Oku kuthetha ukuba ushiya ibhokisi yokukhangela emnyama-nomhlophe njengemifanekiso yamaphephadonga kwi-iPhone X iiveki ezimbalwa, kwaye utshintshe umfanekiso uye kwenye into, ezo zikwere zimhlophe ziya & ldquo; zitshise kwi & rdquo; kwaye iya kubonakala kancinci ngalo lonke ixesha! U-Apple uthi uthathe izilumkiso, kodwa uyavuma ukuba akukho mboniso ye-OLED ikhuselekile kwimicimbi etshisayo. Kuthatha ixesha elingakanani kude kuvele ukutshisa ngaphakathi? Asiboni mkhondo wokutsha kwi-iPhone yethu ukuza kuthi ga ngoku kwaye akukho ngxelo ngayo, ke siyathemba okona kulungileyo.
I-iPhone 8 kunye ne-8 Plus kunye nezikrini zabo ze-LCD azinangxaki kwimicimbi enjalo.
(Egqwesileyo) 1: 1461
(Egqwesileyo) 1: 1478
IOS 11 kunye nangaphandle kwempawu.
Umfanekiso:1ye6Ngethuba lokuqala kwiminyaka, i-Apple igxekwa ngenxa ye-iOS 11 eza nemicimbi ethile yokusebenza. Oku, nangona kunjalo, kusebenza kwii-iPhones ezindala, ngelixa i-iPhone X entsha, 8 kunye ne-8 Plus ibaleka njengebhotolo kakuhle njengangaphambili. U-Apple usebenza ekulungiseni imiba yee-iPhones ezindala, kodwa awuphumelelanga kwaye awuboni nakuphi na ukucotha kunye nee-iPhones zayo ezintsha.
Zonke ii-iPhones ezintathu zisebenzisa i-iOS 11, kodwa umahluko omkhulu usendleleni ohamba ngayo: usebenzisa iqhosha lasekhaya kwi-iPhone 8 kunye ne-iPhone 8 Plus, ngelixa kwi-iPhone X unezimbo zomzimba ezintsha kuyo yonke into. Nalu ulwahlulo olukhawulezayo lwezenzo zomzimba ofuna ukuzazi malunga:
Swayipa phezulu ukusuka ezantsi ukuya kwiscreen sasekhaya
Swayiphela phezulu ukusuka ezantsi kwaye unqumame phakathi kwinqanaba leMultitasking
Cinezela ixesha elide ikhadi kwimboniso yeMultitasking kwaye uliswayiphe okanye ucofe iqhosha elincinci elibomvu ukunyanzela ukuvala usetyenziso. Cofa naphi na kwicandelo elisezantsi ukuze ubuyele kwiscreen sasekhaya
Swayipha ngasekhohlo okanye ngasekunene kwicandelo elisezantsi (umgca wesalathiso sasekhaya) ukuswitsha ngokukhawuleza phakathi kwezonaapps zakutshanje
Swayipha ezantsi kwikona ephezulu ngasekunene (& ldquo; indlebe & rdquo;) yeZiko loLawulo
Swayipha ezantsi ukusuka nakweyiphi na enye indawo ephezulu yeZiko leSaziso
Kusithathile iintsuku ezimbalwa ukuba siqhele kolu hambo, kodwa luziva luthembekile kwaye lunamanzi, kwaye aluchithi naliphi na ithuba lescreen kumaqhosha akwi-screen (njenge-Android), ke izijekulo zibonakala njengesisombululo esikhulu & ldquo; sonke isikrini & rdquo; ifowuni efana ne-iPhone X.
Ngaba siliphosile iqhosha lasekhaya? Hayi kakhulu, ngokunyanisekileyo. Konke oku kungenxa yokuba iApple iphumeze izimbo zomzimba kwi-iPhone X ngokwaneleyo kwaye zisebenza ngokuthembekileyo.
Iphepha elilandelayo: Ukusebenza, ikhamera kunye nesandi
Inqaku lomnyele le-8 ityala lomkhosi
I-Apple iPhone 6s Plus vs OnePlus 2: ngokuthelekisa ukuthelekiswa kwe-specs
Abasebenzisi be-iPhone bavinjelwa ngokungafanelekanga yiPokemon GO
Uyinyusa njani inyani iselfowuni kunye nokufumana okungcono
I-Samsung Galaxy S20 Plus vs uphononongo lweGPS S10
Ezona zi-5 zilungileyo zeepodcast zeefowuni ze-Android kunye neetafile